Ny Birao Mpitsidika ao Guam dia mitady solontena amin'ny fizahantany fizahan-tany any Filipina
Home » Travel Associations News » Ny Birao Mpitsidika ao Guam dia mitady solontena amin'ny fizahantany fizahan-tany any Filipina
Ny Birao Mpitsidika ao Guam (GVB), orinasam-panjakana tsy miankina amin'ny orinasa, tsy mitahiry vola, dia namoaka fangatahana Proposal ("RFP") mangataka tolo-kevitra avy amin'ireo orinasam-barotra efa niorina mba hanao ny GVB FANOMPOANA NY FITSIPIKA NY FIVORIANA NY FITSIPIKA NY FIZARAM-PIRENENA NY FILIPINA hanampy ny GVB amin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany Guam ary hahatratra ny tanjon'ny fahatongavan'ny mpitsidika any Filipina.
Ny fonosana RFP koa dia azo sintonina tsy andoavam-bola Tranokalan'ny GVB na azo (amin'ny endrika USB) ao amin'ny Biraon'ny GVB, làlana 401 Pale San Vitores, Tumon, Guam, 8:00 AM - 5:00 PM, Alatsinainy - Zoma, tsy ankanavaka ny fialantsasatr'i Guam. Ny sarany $ 25.00 tsy azo averina dia takiana amin'ny fonosana tsirairay alaina ao amin'ny biraon'ny GVB azo aloa amin'ny vola US $, famindrana tariby banky na carte de crédit lehibe (Visa, MasterCard, Discover, JCB).
Ny fanontaniana, raha misy dia tokony hapetraka an-tsoratra amin'ny filoham-pirenena sy CEO, izay azo alefa ao amin'ny biraon'ny GVB; nandefa mailaka tamin'i [email voaaro]; na nalefa tamin'ny fax tany amin'ny 671-646-8861 araka ny fandaharam-potoana voatondro ao amin'ny RFP.
Mampahafantatra ny mpamatsy vola rehetra ny GVB amin'izany fa hanome toky izy ireo fa ny orinasan'ny orinasa vitsy an'isa dia hanana fotoana feno handefasana valiny amin'ity fangatahana soso-kevitra ity ary tsy hanavahana azy ireo noho ny firazanana, ny volon-koditra na ny fiaviam-pirenena raha jerena ny loka.
Zon'ny GVB ny mandà ny tolo-kevitra rehetra na amin'ny tolo-kevitra rehetra, hanafoana ny tsy fahalavorariana ao anaty ny tolo-kevitra, na hanafoana an'io fangatahana io araka ny lalàna mba hahasoa ny birao. Voarara ny fifandraisana mivantana na tsia amin'ny GVB Management na ny Staff, ny mpikambana ao amin'ny birao, na ny olona mandray anjara amin'ny fizotran'ny fifidianana.
Raha liana amin'ny fandefasana tolo-kevitra ianao dia mariho fa ny fetr'andro fandefasana dia alohan'ny 5:00 hariva (Fotoana Chamorro mahazatra) amin'ny Alatsinainy 28 Oktobra 2019.